China Cobalt manga 16 oz Boston boribory boribory ary manosotra voatavo voatavo voatavo orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Hoyer
Kobalt manga 16 oz Boston boribory boribory ary manosika voatavo voatavo voatavo ambony
Tavoahangy kobalt: ny fitaratra kobalt dia miaro UV, indrindra ho an'ny aromatherapy, menaka manan-danja ary fitsaboana hohanina mba hitazonana vokany mahasoa.
Paompy vy vita amin'ny vy, ny tampon'ny paompy dia ivelany vy stainless ary anatiny misy plastika BPA-FREE.
Versatile: dakozia, efitra fandroana, fanasana, birao, salon, sy ny maro hafa. Fangaroan'ny menaka Aromaterapy, fanamaintina savony, mpamaky ny shampoo sy ny mpamindra fepetra, ny mpanamory tanana, sns.
Haavo: 216mm / 8.5 santimetatra
Color: manga kobalt na araka izay takianao
Tianao ve ny manga? Izy io dia sarotra sy milamina. Ireo tavoahangy boribory boribory kobalt manga ireo dia azo ampidirina amina sehatra rehetra ahafahana mampitony ny fahatoniana, indrindra fa ny tampony voatavo stainless steel brosiana.
Ampiasaina ho an'ny: Aromaterapy tena mifangaro menaka / mpamono / sabatra / dispenser ny tanana / Saniterer dispenser / Shampoo ary dispenser / Emulily mpaninjara / Ary maro hafa
Mety amin'ny efitra fandroana, lakozia, birao, efitrano fatoriana ary efitrano fampiasana.
Ny tampon-tsolika vy tsy misy vy dia tsy hampiseho rantsantanana
Ny singa anatiny ao amin'ny tampon'ny paompy dia loharano vy tsy misy vy sy fantsona plastika tsy misy lanja BPA-Free
Tavoahangy feno rano 16 vera = 2 kaopy = 1 pint = mililika 475
Fiarovana ara-tsakafo, fitaratra misy mari-pahaizana
Size Boky: 475ml Haavony: 216 mm Diameter: 70 mm Boky: 16 oz H: 8,5 santimetatra D: 2.75 santimetatra
Color Lanitra manga / volontany ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
Sample a. santionany amin'ny tahiry:QTY: 1–5 pcsVidiny: nomena malalakaHafa: manangona
Previous: 4 oz Spice Glass Shaker miaraka amin'ny Labana Chalkboard ary Stainless Steel Lid
Manaraka: 16oz Glass savony Dispenser miaraka amin'ny Silicone Funnel